Angelica Timanina - omunye abasubathi edume kakhulu ukubhukuda ezivumelanisiwe, wakwazi ngokuphindaphindiwe ukufakazela ukuthi ukuzimisela ngeke ukuwina bazokwazi ukuthola umhlaba wonke ukhuluma ngawe. Futhi sikhulume ngakho, ngoba akuyona nje 11-isikhathi World Champion, kodwa futhi iqhawe-Olympic.
Angelica Timanina: Biography, ebuntwaneni
Umsubathi Ikusasa Timanina storys wazalwa ngo-1989, ngo-April 26 emzini Sverdlovsk. Uma intombazane kusukela zisencane waqala ukubonisa uthando emanzini, abazali azange abe nobunzima kukhethwa ezemidlalo ukuba amaqhawe esizayo, walinika ingxenye ukubhukuda ezivumelanisiwe. Ngemva kwaqhutshwa amakilasi okuqala eqenjini ezivumelanisiwe ababhukudi Angelica Timanina phathelana kakhulu ivelele ofunda naye ekilasini yabo ukubhukuda. Bese kuthi-ke intombazane eqala ukuprofetha ngokuzuma emhlabeni kwezemidlalo.
kwesifundo sokuqala Angelica wavakashela iminyaka 5, futhi ngisho nangalesosikhathi Umqeqeshi walo wokuqala esikoleni №19 SDYUSSHOR -. L. Yu Kapustina ukuthi le ntombazane elinde kokuwina okukhulu, futhi wayeqinisile. Lapho eYekaterinburg esikoleni ezingeni ukubhukuda ezivumelanisiwe baba Angelica lula, abazali bami banquma ukulihambisa eMoscow, futhi lapho, ngo-2005, wathola isihloko esasiwafanele wenkosi kwezemidlalo yeRussia.
Waqala umsebenzi wakhe sinhronistki Anzheliki Timaninoy ngisho nalapho eseyingane, kodwa emhlabeni wangempela ka ezemidlalo zochwepheshe yena wangenela 2008, lapho kwaba ingxenye yokuqala, futhi ngemva, futhi owazuza endaweni yesithathu kule midlalo, lapho ababedlala Umhlaba Trophy ka-International Federation of amanzi ezemidlalo. Nakuba Russian ezivumelanisiwe ukubhukuda iqembu kwenziwe abasebenzi junior, futhi kanye Angelica ngenkathi indawo yesithathu sathathwa nomlingani wakhe luhlelo Duets Daria Korobov. Kodwa lokhu kwakuyisiqalo nje ekuqaleni endleleni yakhe umsebenzi, futhi aseqala zako ezisemqoka kwenzeka ngo 2009, lapho eneminyaka engu-ingxenye eqenjini lesizwe Russian.
Ngonyaka ka-2009 waqala i-World Cup, owawusedolobheni eRoma. Intombazane wakwazi ukunqoba izindondo amabili egolide izinhlelo lobuchwepheshe kanye neqembu. Ngelinye ilanga ngo-2010, e Budapest labetibambile World Cup kanye ababhukudi Russian ezivumelanisiwe yaphuma phambili, eshiya kungekho izimbangi kangako. Igebe e amaphuzu ngakho amantombazane ayekuthathile phambili ukunqoba ubuqhawe laduma emhlabeni wonke.
Kodwa kungakhathaliseki ukuthi iphakeme kangaka futhi onqobayo amaningi sinhronistki, umgomo waso oyinhloko uye njalo wahlala iMidlalo Yama-Olympic. Futhi ngemva kohambo olude intombazane ngakwazi abe iqhawe Olympic Games in 2012. Khona-ke ababekuso London, futhi lo msubathi kuhlulekile ukunqoba imincintiswano iqembu. Kwakubonakala sengathi zonke amaphupho kanye nemivuzo ukuthi kungenzeka, le ngane kakade iwine, kodwa akazange ayeke khona, ngoba kukhona namanje omunye Imidlalo yama-Olympic, futhi zaziziningi Championships izwe ukuthi elizonqoba. Alo ukunqoba nokuzimisela akazange ukudanisa. Manje Angelica Timanina, izithombe ongawabona esihlokweni - professional ababhukudi Russian ezivumelanisiwe, eyaziwa emhlabeni wonke.
The main kwezemidlalo
Ngo-2011, i-ababhukudi ezivumelanisiwe kungenzeka waphinda uzitholele wonke umuntu ukuthi elinye lamathuba angcono kakhulu kwezemidlalo kwabo World Cup, owawusedolobheni Shanghai. Angelica Timanina waba kathathu iqhawe emhlabeni eqenjini umncintiswano futhi inhlanganisela yawo. Ngemva kokunqoba eMidlalweni Yama-Olympic e-London ngo-2013, yena wawina nezindondo ezimbili zegolide ngenxa yezwe lakubo. Imincintiswano yayiqhutshelwa Kazan. Medal azithola iqembu futhi ukusebenza kuhlangene phezu Universiade ehlobo. Kodwa kulo nyaka, unina walungisa abalandeli bakhe komunye yinto emnandi ababengayilindele. Yiya World Championships e Barcelona, waphinde wawina iqembu futhi ukusebenza kuhlangene. Manje useneminyaka engu-27 ubudala, futhi ngenxa yokunqoba ezimpini zayo nanye at Championships emhlabeni, isihloko Olympic isihloko Master ahlonishwe of Ezemidlalo.
Angelica Timanina: umyeni, empilweni yakho
Ukuze uhlele ukuphila kwakhe siqu uma zinike wonke umdlalo, akulula neze. Lapho ngakho ngoba wayekhanga sendleleni njalo, futhi wacabanga kuphela yokulungiselela umncintiswano futhi ukuqeqeshwa. Noma kunjalo, wakwazi ukuthola umfana ehloniphekile egama layo linguJehova Ivan Vasiliev. Ngemva kweminyaka emithathu a ahlangane futhi usathandana umfana wenza intombazane isicelo somshado, no-Angelica Timanina washada. Njengoba ekugcineni wachaza ngesikhathi enengxoxo umbhangqwana osemusha, baye ajwayelekile isikhathi eside. Sahlanganyela abangane jikelele. The guy ngokushesha waqaphela wakhe, kodwa Angelica ngenkathi ecabanga kuphela mayelana mdlalo, nokuxhumana kwabo kumile. Ngemva kokufunda iminyaka embalwa ukuxhumana nomphakathi futhi lalifuna Ivan no-Angelica, futhi ngisho nangalesosikhathi abakwazanga ukuhamba. Wedding zidlala Thailand, emcimbini yavalwa, ngisho nezihlobo wayengekho. Lo mbhangqwana kangangokuthi wanquma ukwenza lokhu kusihlwa nje ezimbili, futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa ukuze kubo kakade wajoyina nemikhaya yazo nabangane.
Manje ujabulela udumo lwakhe nokuphila komkhaya. Ngenxa umshado Angelica Timanina isikhathi esincane ubeke mdlalo, kodwa ukuthi akuvimbeli ke kusukela iyona engcono kakhulu eqenjini lakhe. Intfombatane njengoba ngenkani nje uyaqhubeka ukuqeqesha, kanye, ngaphezu ukuphila yezemidlalo, kuye kwaba nowezwe. Ngo-2014 yena waklonyeliswa isihloko kwabadlali eziningi zezwe, kwaba ukwazi kuphela dlula football Fedor Smolov. Owesifazane futhi manje ungakwazi ngokuvamile bahlangana ngo reception ahlukahlukene namaqembu, iyasebenza kakhulu futhi, ngenxa yalokhu, ayiphethe ukuhlanganisa umsebenzi wokuziphilisa omuhle ukubhukuda izithombe ezinemibala ezazihambisana nekhasethi nokuphila komkhaya okujabulisayo. Futhi, wayesanda kuphela iziqu Institute of Sekutivocavoca Ural State Pedagogical University.
Isifiso uwine kanye nesifiso abonise iphasi ukuthi iyona engcono kunazo, bavunyelwe enyukela 11-izikhathi iqhawe emhlabeni e ezivumelanisiwe ebhukuda Anzhelike Timaninoy esisekelweni wenkazimulo. Mayelana-ke esitshela umhlaba wonke, kodwa yena ngeke ayeke, ngoba phambi kunezindlela eziningi ukukhombisa ukuthi iyona engcono, hhayi kuphela emkhakheni wezemidlalo, ukubhukuda ezivumelanisiwe, kodwa nakwezinye izindawo eziningi.
Singagcina ngokubu- ufisa inhlanhla ukuba le ntombazane enhle egxilile zonke ulwela ukwenza kwakhe futhi ngokunqoba entsha esihle!
Svetlana Kolesnichenko: Biography, umsebenzi kwezemidlalo
Pool ngesikhathi Tushino airfield - esikhundleni zokubhukuda isizini
Umshayeli waseRussia u-Valery Kecinov
Uhlelo 1155 kwezisekelo: ukusebenza nokuthembeka ngesikhathi intengo imali
Lenses amasonto ama-2: izinzuzo, nebubi, futhi nokubuyekezwa lens Acuvue Oasys
Residential eziyinkimbinkimbi "Spring" Aprelevka: ikheli, umakhi, isithombe indlu Izibuyekezo
Inhlanganisela kwesitayela: tights mnyama nezimnyama skirt
Ezidabukile ephansi emuva ekukhulelweni ekuseni. Ukudansela isiginci sakhe aphansi esiswini ephansi emuva: yini okufanele uyenze?
Yini ukunikeza intombazane iminyaka engu-20?